ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူထားတဲ့ အာဏာရူးစစ်ကောင်စီနဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်ပါးစေ လက်နက်ကိုင်တွေ… – PVTV Myanmar
ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူထားတဲ့ အာဏာရူးစစ်ကောင်စီနဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်ပါးစေ လက်နက်ကိုင်တွေ…
·7months ago ·21 Comments
ပြည်သူ့အာဏာကို လုယူထားတဲ့ အာဏာရူးစစ်ကောင်စီနဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်ပါးစေ လက်နက်ကိုင်တွေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)က ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကို လူမဆန်စွာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ရန်ကနေ ပြည်သူလူထုကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ ပြည်သူလူထုကြားကနေ ပေါက်ဖွားလာကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေနဲ့ ဒေသအခြေပြု ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီး ခုခံကာကွယ်စစ်တွေဆင်နွှဲလျက်ရှိကြသလို အောင်ပွဲတွေလဲ ရရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ “လုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရစေရ” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ရင်ဆိုင်တော်လှန်နေကြတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒအမှန်ဟာ “အာဏာရှင်နဲ့ သူ့လက်ပါးစေများကျရှုံးပြီး ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူ့လက်ဝယ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေး” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်များအရေးနိမ့်ခြင်းဟာ “ပြည်သူ့အောင်ပွဲ” ဖြစ်တာကြောင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားညီနောင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေကို “ပြည်သူ့အောင်ပွဲ အထူးသတင်း” အနေနဲ့ စုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 18K Share – 1860
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီ (Central Working Committee) ကိုဖွဲ့စည်း
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို လက်နက်ဝယ်ယူပေးနေသူ လက်နက်ပွဲစား ၉ ဦးအား အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းပြီး ယင်းတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထုတ်ပြန်
မုံရွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်ပင်မသပိတ်ပူးပေါင်း စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးသပိတ်စစ်ကြောင်း
Thaw Zin says:
2021-07-14 at 11:25 PM
ကနီမှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မအလ စကစ ကသတ်ခဲ့တာ‌ကြတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှ ‌မအလ စကစ ကိုဖိအားပေးတာ မမြင်ဘူး
တဒဂၤ လူသား says:
2021-07-15 at 1:49 AM
ျပည္​သူ​ေတြကို ၾကဴးလြန္​​ေသး စစ္​​ေခြ အ​ေပါင္​းတို႔ အားလံုး​ က်႐ွံုးၾကပါ​ေစ
သို႔​ေသာ္​ ျပည္​သူမ်ားကို ကာကြယ္​​ေစာက္​​ေ႐ွာက္​​ေတဲ့ တပ္​မ​ေတာ္​ကိုသာ ​​ေလးစာ​ေထာက္​ခံပါမယ္​
ကာကြယ္​​ေစာက္​​ေ႐ွက္​တဲ့ ျပည္​သူတပ္​မ​ေတာ္​သာ ျဖစ္​ရပါမယ္​
Khin Htay Htay says:
2021-07-15 at 5:55 PM
Aye Than Htoo Tsuchiya says:
2021-07-16 at 6:45 AM
Appreciate you all stop fighting for demonstration . That is good job .
2021-07-16 at 4:20 PM
တိုင်းပြည်နဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ​တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို အ​နှောက်အရှက်​ပေး​နေတဲ့သူက​
PDF ပြည်သူ့တပ်မ​တော် ​ဘေးကင်း​အောင်မြင်ပါ​စေ
2021-07-18 at 12:02 PM
2021-07-18 at 12:03 PM
2021-07-18 at 5:06 PM
စကစအကုန်သေမှဖြစ်မှာငါတိုတပ်မတော် kia အဆိူရလာမှာငြိမ်းချမ်းမှာကွ
Ko Chit says:
2021-07-18 at 8:20 PM
Thanoo Thanoo says:
2021-07-18 at 9:35 PM
Ko Khing says:
2021-07-19 at 6:46 AM
ေဆာင္း ေဟကို says:
2021-07-19 at 8:05 PM
ရင္းအခ်ိန္မွစ၍ CRPH. ကို ေထာက္ခံေသာ ျမန္မာျပည့သူေႏြကို စစ္ေကာင္စီမွ ရန္သူအားေပး သတ္မွတ္ကာ ဆရာဝန္ေတြ၊ ပရဟိတအသင္းေတြ ၊ တက္ႂကြလူငယ္ေတြ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိတိုက္ဖ်က္ေနကာ…… ေနာက္ဆံုးက်ည္ ဇီဝလက္နက္ Covid. သံုးရင္ အေထာက္ပံ့ မျဖစ္ေအာငိ စနစ္နက်လုပ္ေဆာင္ေန…. ၾကားျဖတ္ သက္ေသအေနနဲ႔. ျပည္သူေတြ ေအာက္ဆီဂ်င္ လိုအပ္မႈမ်ားကို မကူညီသည့္အျပင္ အေနႇာက္႐ွက္ေတြေပေနးျခင္းသည္ အာဏာသိမ္းးစစ္အုပ္စု၏ ျပည္သူအေပၚ. ထား႐ွိေသာ စိတ္ဓာတ္အမွန္ကို ျပသလိုက္ၿပီးျဖစ္၍ ျပည္သူေတြ စစ္အုပ္စုကို လံုဝ. မယံုၾကရန္……
ေကာင္းဆက္ႏုိင္ ေကာင္းဆက္ႏုိင္ says:
စစ္​အာဏာ ဘယ္​တုန္​က​ေကာင္​းခဲဘူလိုလဲ ႏိုင္​ငံမွာရိွျမ သရန္​ဇတ ​ေတြ သူတို အိပ္​ထဲထည္​ အထက္​က​ေတာ့ ႀကီပြာလို ​ေအာက္​လက္​ခဲသား​ေတြၾက​ေတာ့ ငပ္​လိုျပတ္​လို တိုင္​းျပည္​​ေတာ မြဲၿပီရင္​မြဲရင္​ ဘာ​ေကာင္​တံု စစ္​အာဏာ ခုဘဲကည္​​ေလ ျပည္​သူ​ေတြရက္​ရက္​စက္​စက္​သက္​​ေနတာ စစ္​​ေခြ​ေတြ အျမစ္​ျပက္​ တိုက္​ထုပ္​ရမယ္​
Aye Nandar says:
2021-07-20 at 4:03 PM
ထာဝရ ထာဝရ says:
2021-07-20 at 10:13 PM
အရာရာကို တန္ဖိုးထားပါ says:
2021-07-21 at 9:03 AM
2021-07-21 at 9:10 AM
စစ္ေခြးအုပ္စုကိုဒို႔ျပည္သူေတြက်ိမ္စာတိုက္လို႔ငရဲမႀကီးဘူးဆိုတာသိထားပါစစ္ေခြးအုပ္စုေရာက္ရာအရပ္မွာအျမန္ဆုံးအေသဇိုးနဲ႔မ်ားမ်ားေသပါေစ တိုက္ပြဲတိုင္းလည္းမ်ားမ်ားေသပါေစ ကုန္းလမ္းသြားလည္းေဘးျဖစ္ၿပီေသပါေစ ေလေၾကာင္းနဲ႔သြားလည္းေဘးျဖစ္ၿပီးမ်ားမ်ားေသပါေစ ေရေၾကာင္းနဲ႔သြားလည္းမ်ားမ်ားေသပါေစအိမ္မွာေနလည္းေဘးေတြ႔ပီးေသပါေစ ျပည္သူ႔သစြာေဖာက္အားလုံး
May May May says:
2021-07-21 at 11:11 AM
2021-07-22 at 5:52 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက “အ…